Qaxooti Kurdi ah Iyo Ciidamada ilaalada Xuduudaha Dalka Turkiga oo gacmaha iskula tagay +sawiro+video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Qaxooti Kurdi ah Iyo Ciidamada ilaalada Xuduudaha Dalka Turkiga oo gacmaha iskula tagay +sawiro+video
Ciidamada ilaalada Xududaha Dalka Turkiga iyo qaxooti kurdi ah oo ka qaxay dagaalada kasocda Dalka Siiriya ayaa gacmaha iskula tagay kadib markii qaar kamid ah dadka qaxootigaasi ah ay damceen in ay gudaha usii galaan Dalka Turkiga.
Dad badan oo dibad baxayaal Kurdi ah ayaa isugu soo baxay Xuduuda uu Turkigu la wadaago dalka Siiriya,, waxa ayna halkaasi ka sameeyeen dibad baxyo rabshada wata oo gaadiid iyo taayareo lagu gubay.
Ciidamada Turkiga ee ilaalinayay Xuduuda Siiriya la wadaago dalkaasi ayaa qaxootiga dibad baxa dhigayay waxa ay u adeegsadeen biyaha boyadaha ay tuuraan iyo waliba suntan dadka ilmada ka keenta.
Labo qof ayaa la xaqiijiyay in dhaawacyo culus ay kasoo gaareen rabshadaha u dhaxeeyay Ciidamada ilaada Xuduudaha Turkiga iyo qaxootiga kurdiga kasoo jeeday ee kasoo cararay Colaada Dalka Siiriya ka aloosan.
Dowladda Turkey ayaa sheegtay in in kabadan boqol iyo soddon kun oo qaxooti Kurdishka Suuriyiinta ah ay soo dhaafeen xuduuda Turkey saddexdii maalmood ee ugu danbaysay, iyagoo ka soo cararaya kooxda Daacish.